သူ့ အတှကျ အယုံကွညျရဆုံး လို့ထငျထား သူ ရဲ့ သစ်စာဖောကျတာကို ခံလိုကျရလို့ ပေါကျကှဲနတေဲ့ အုပျစိုးခနျ့ – Shwe Likes
ခဈြစဖှယျ အသံခြို ခြိုလေးကို ပိုငျဆို ငျထားပွီးတော့ အခဈြသီခြ ငျးပေါငျးမြား စှာကို သီဆိုလေ့ ရှိတဲ့ အဆိုတျော အုပျစိုးခနျ့ ကိုတော့ လူတိုငျးသိ လိမျ့မယျ ထ ငျပါတယျ။ အုပျစိုးခနျ့ ဟာ ” ခဈြနပွေီ” ဆိုတဲ့ သီခြ ငျးလေးနဲ့ ပရိသတျ ရငျထဲကိုရောကျရှိခဲ့တဲ့ အဆိုေ တျာေ လးတဈ ဦးလဲဖွဈပါတယျ။
နာမညျကွီးခဲ့တဲ့ သီခငျြးေ လးအပွငျ ‌နောကျထပျ လဲသီခငျြးကော ငျးမြားစှာ ထှကျရှိထား ပါေ သးတယျ။ အုပျစိုးခနျ့ ဟာ တေးသီခြ ငျးတှေ သီဆိုရာမှာ ကောငျး မှနျရုံတငျမက ရုပျရှ ငျခြောမောတာေ ကွာငျ့လဲ နှုတျခမျးနီ မလေးတှရေဲ့ တဈခဲနကျ အားပေးမှု့ ကို ရရှိ ထားသေး တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့လူမှု့ကှနျယကျမှာ လူတဈေ ယာကျက လိမျတာ ကိုခံလိုကျရလို့ ပရိသတျကွီးကို ရငျဖှငျ့ထား တာကိုလဲ တှရေ့ပါတယျ။
အုပျစိုးခနျ့ ဟာ သူ့ရဲ့သူငယျခြ ငျးနဲ့ပတျ သတျပွီး အခုလိုပဲေ ရးသားလာ ပါတယျ။ “ပိုငျစိုး(Liam) မငျးငါ့နောကျကြောကို ဒါးနဲ့ထိုး ရတာ မပီးတော့ဘူး လားကှာ မငျးမေ မာသေးဘူးလား မငျးလု ပျနတောတှေ ငါအကုနျသိတယျ…..ငါစိတျထဲမှာထငျ့နလေို့ ငါ story ကို custom လုပျတငျ လိုကျတာ နောကျနေ့ မငျးရဲ့ “ Cele Spy Small “ ဆိုတဲ့ page မှာငါထငျတဲ့အ တိုငျးခကျြ ခငျြးတကျလာတ ယျ သားကွီးရာ..
ငါတို့ခငျမငျမှုကို မကျြနှာထောကျပီး မတငျဖို့လုပျ ထားပမေယျ့ ပိုပီးဆိုး လာလို့ တငျမှရတော့မယျ သားကွီးရေ နိူငျငံရေးအခွေ အနကွေောငျ့ အားလုံး စိတျညဈေ နကွခြိနျမှာ ငါ့ကိုန ငျးပီးမှမငျး page ကို followers ရှာတာတှေ ရပျသငျ့ပါပီ သူငယျခငျြးရာ ဒီထကျရှ ငျးတာ မရှိတော့ပါဘူး မငျးဟုတျ မဟုတျ ငါစမျး ကွညျ့တာ မငျးငွငျးခွငျသေးလား? နိူငျငံရေးကွောငျ့ အားလုံးစိတျ ညဈနကွေတဲ့အခြိ နျ ဒီပိုဈကိုတငျရလို့ အား လုံးကိုတောငျး ပနျပါတယျ ခငျဗြာ ” လို့ အုပျစိုးခနျ့ ဟာရေးသားထားတဲ့ သတငျးလေး ကိုပွနျလ ညျမြှဝတေငျဆကျေ ပးလိုကျ ပါတယျ။
ပရိသတျကွီးရေ… လောကမှာ ကိုယျ့ အယုံကွညျဆုံးလို့ သ တျမှတျထားတဲ့ လူတဈယောကျက လိမျသှားပဲဖွဈဖွဈ ဖောကျပွနျသှား တာပဲဖွဈဖွဈ အရမျး ကိုဝမျးနညျးခံစားရဖို့ ကောငျးပါ တယျနျော။
သူငယျခငျြးက နောကျကြောဓားနဲ့ ထိုးတာကို ခံလိုကျရတဲ့ အဆိုေ တျာ အုပျစိုးခနျ့အတှကျ အားပေးစကားလေးတှကေို ပွောပေးခဲ့ပါအုနျး။ အခြိနျပေးပွီး ဖတျရှု့ပေးတဲ့ စာဖတျပရိ သတျကွီးကို ကြေးဇူးအထူး တငျရှိပါတယျ။
ချစ်စဖွယ် အသံချို ချိုလေးကို ပိုင်ဆို င်ထားပြီးတော့ အချစ်သီချ င်းပေါင်းများ စွာကို သီဆိုလေ့ ရှိတဲ့ အဆိုတော် အုပ်စိုးခန့် ကိုတော့ လူတိုင်းသိ လိမ့်မယ် ထ င်ပါတယ်။ အုပ်စိုးခန့် ဟာ ” ချစ်နေပြီ” ဆိုတဲ့ သီချ င်းလေးနဲ့ ပရိသတ် ရင်ထဲကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ အဆိုေ တာ်ေ လးတစ် ဦးလဲဖြစ်ပါတယ်။
နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ သီချင်းေ လးအပြင် ‌နောက်ထပ် လဲသီချင်းကော င်းများစွာ ထွက်ရှိထား ပါေ သးတယ်။ အုပ်စိုးခန့် ဟာ တေးသီချ င်းတွေ သီဆိုရာမှာ ကောင်း မွန်ရုံတင်မက ရုပ်ရှ င်ချောမောတာေ ကြာင့်လဲ နှုတ်ခမ်းနီ မလေးတွေရဲ့ တစ်ခဲနက် အားပေးမှု့ ကို ရရှိ ထားသေး တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့လူမှု့ကွန်ယက်မှာ လူတစ်ေ ယာက်က လိမ်တာ ကိုခံလိုက်ရလို့ ပရိသတ်ကြီးကို ရင်ဖွင့်ထား တာကိုလဲ တွေ့ရပါတယ်။
အုပ်စိုးခန့် ဟာ သူ့ရဲ့သူငယ်ချ င်းနဲ့ပတ် သတ်ပြီး အခုလိုပဲေ ရးသားလာ ပါတယ်။ “ပိုင်စိုး(Liam) မင်းငါ့နောက်ကျောကို ဒါးနဲ့ထိုး ရတာ မပီးတော့ဘူး လားကွာ မင်းမေ မာသေးဘူးလား မင်းလု ပ်နေတာတွေ ငါအကုန်သိတယ်…..ငါစိတ်ထဲမှာထင့်နေလို့ ငါ story ကို custom လုပ်တင် လိုက်တာ နောက်နေ့ မင်းရဲ့ “ Cele Spy Small “ ဆိုတဲ့ page မှာငါထင်တဲ့အ တိုင်းချက် ချင်းတက်လာတ ယ် သားကြီးရာ..
ငါတို့ခင်မင်မှုကို မျက်နှာထောက်ပီး မတင်ဖို့လုပ် ထားပေမယ့် ပိုပီးဆိုး လာလို့ တင်မှရတော့မယ် သားကြီးရေ နိူင်ငံရေးအခြေ အနေကြောင့် အားလုံး စိတ်ညစ်ေ နကြချိန်မှာ ငါ့ကိုန င်းပီးမှမင်း page ကို followers ရှာတာတွေ ရပ်သင့်ပါပီ သူငယ်ချင်းရာ ဒီထက်ရှ င်းတာ မရှိတော့ပါဘူး မင်းဟုတ် မဟုတ် ငါစမ်း ကြည့်တာ မင်းငြင်းခြင်သေးလား? နိူင်ငံရေးကြောင့် အားလုံးစိတ် ညစ်နေကြတဲ့အချိ န် ဒီပိုစ်ကိုတင်ရလို့ အား လုံးကိုတောင်း ပန်ပါတယ် ခင်ဗျာ ” လို့ အုပ်စိုးခန့် ဟာရေးသားထားတဲ့ သတင်းလေး ကိုပြန်လ ည်မျှဝေတင်ဆက်ေ ပးလိုက် ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ… လောကမှာ ကိုယ့် အယုံကြည်ဆုံးလို့ သ တ်မှတ်ထားတဲ့ လူတစ်ယောက်က လိမ်သွားပဲဖြစ်ဖြစ် ဖောက်ပြန်သွား တာပဲဖြစ်ဖြစ် အရမ်း ကိုဝမ်းနည်းခံစားရဖို့ ကောင်းပါ တယ်နော်။
သူငယ်ချင်းက နောက်ကျောဓားနဲ့ ထိုးတာကို ခံလိုက်ရတဲ့ အဆိုေ တာ် အုပ်စိုးခန့်အတွက် အားပေးစကားလေးတွေကို ပြောပေးခဲ့ပါအုန်း။ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှု့ပေးတဲ့ စာဖတ်ပရိ သတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါတယ်။